Saamaynta dagaalka Soomaaliya - BBC News Somali
Saamaynta dagaalka Soomaaliya
27 Jannaayo 2011
Image caption Soomaalida ka soo carartay dagaalada
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in dhowr malyan oo Soomaali ah ay saameysay abaarta ka jirta waqtigan gobollada dalka.
Meelaha u horeeya ee laga dareemi karo abaarta waa carruurta Soomaalida oo Qaramada Midobay ay sheegtay in lixdii cunug mid ka mid ah uu la il-daran yahay nafaqo-darro.
Urrurada samafalka ee OXFAM iyo ICRC ayaa iyaguna ka hadlay xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Xoola-dhaqato deganeyd gobollada la jaarka caasimadda Muqdisho aya markii xoolihii ay dhaafeen abaarta darteed waxay soo degeen oo nolol u soo doonteen xaafadaha ku yaal duleedka Muqdisho.
Aakhirkii Janaayo ayaa deegaano ka mid ah caasimadda Soomaaliya ay boqolaal dad ay ku banaan baxeen ah oo ka mid ah dadkii abaartu soo xaalufisay oo dalbanayey gar gaar.
Abaarta iyo gaajada ka jirta gobollada Soomaaliya waxaa wehliya dagaalo sokeeye, collaad dalka ka jirtay 20kii sano ee la soo dhaafay oo caqabad ku noqday hawlihii samafalka ee loogu gar gaari lahaa dadka dhibaateysan.
Dagaalada maalin walba ku dhexmaraaya magaalada Muqdisho ciidamada dawladda iyo kuwa kooxaha islaamiyiinta, dadka ku dhinta iyo kuwa dhaawacma waxaa u badan dumar iyo carruur, iyadoo isbitaalada Muqdisho ee ay kaalmeyso ICRC lagu daaweeyey 2010 dad ka badan lix kun qof oo dagaaladaas ku dhaawacmay, tiradan oo ka badan dadkii sanadkii 2009 ku dhaawacmay collaada. Muqdisho.
ICRC bishii hore war qoraal ah oo ay ka soo saartay Geneva waxaa ay ku sheegtay in ay cunno u qaybisay dad gaaraya nus malyuun qof oo ku barakacay dalka gudihiisa.
Image caption Gargaarka Soomaaliya
Daraasaad ay samaysay Qaramada Midoobay ayaa ku talisay in la kordhiyo talaabooyinka looga hortagayo burcad baddeeda Soomaalida, oo ay sheegeen in caalamka ay oga baxdo toddobo billion oo Dollar sanadkii.
Daraasaad uu sameeyay Jack Lang oo ah wasiir ka tirsanaan jiray dowladda faransiiska ayaa sheegfay in Burcada ay badinayso weerarkeeda .
Wuxuu ku taliyay in la sameeyo maxkamad Soomaali ah, laakiin laga sameeyo wadan kale.
Waxay kaloo daraasaadka sheegeen in ciidamada badda ee ilaalinaaya badaha inay u dhawaadaan xeebta Soomaaliya, halkaas oo ay burcada ay joogaan iyo in loo abuuro shaqo dhaliyarada Soomaalida si aysan ugu biirin Burcadda.
Image caption Burcada badaha Soomaalida oo sii badanaya
Image caption Tirada burcadda sanadihii ugu danbeeyay
Burcadda Soomaalida ayaa haysata in kabadan lix boqol oo qof, iyo labaatan iyo lix markab.